रेलमा ४८ घन्टा ! पटना देखि बेंगलोर सम्म ! भो-नकुरागरम !!! [भाग-६]
Aakar July 17, 2011
बिहान झिसमिसे मै निन्द्रा खुल्यो । कुदिरहेको रेलबाट बाहिर हेरेँ । रेल पूर्व कि पश्चिम तिर गइरहेको छ, पत्तो पाउन गाह्रो पर्यो । तर बाहिरको दृश्य मलाई नौलौ लागिरहेको थियो । टाढा टाढा सम्म भर्खर जोतिएको झैँ लाग्ने खेतबारीहरु थिए । आफूलाई आफू कुन ठाउँमा आइपुगेँ केही थाहा थिएन । म्याप निकालेर पल्टाएँ, अहँ थाहा पाउन सकिन । रेल गुडिरहेको थियो, सायद ती गाउँका मान्छेहरु नै होलान्, बिहानै सबै 'मैदान’ गर्न मा व्यस्त थिए । बारीमा टाढा टाढा सम्म ती गाउँलेहरुको लस्कर देखियो, जो बिहानै ‘शौच’ गरिरहेका थिए, अनि उनीहरुको शौचालयको छत खुल्ला आकाश थियो ।
म उठेको केही समयपछि सबै साथिहरु उठे ! हामी ४ नेपालीहरु सँगै थियौँ, मैले पटनामा रेल चढिसकेपछि ३ जनालाई भेटेको थिँए । एकजना हुनहुन्थ्यो भक्तपुरमा टायल फ्याक्र्टि चलाउनु हुने ‘प्रजापति’ दाइ, अनि उहाँ को छोरा, अनि अर्को एकजना राजमाझी थरको कलाकार (मुर्तिकार) हुनहुन्थ्यो । हामी ४ जना बिहान उठेर, ‘चायवाला’ ले ल्याएको चिया पियौँ । पटनाको प्लेटफार्म मै बनाइएको साथि पनि सँगै थियो, उ जवलपुर भन्ने ठाउँमा झर्नेवाला थियो । अब ५-६ घन्टा मा जवलपुर पुगिन्छ भन्थ्यो ।
हामी ४ जनाले विविध विषयमा छलफल गरेर बस्यौँ, बाटो भरि नै । उहाँहरुका रमाइला ‘प्रोजेक्ट’हरु र ‘परिकल्पना’हरु सुनाउनु भयो । उहाँहरुले भनेजस्तो भयो भने, नेपालमा केही वर्ष भित्रैमा एउटा बेग्लै किसिमको पार्कको निर्माण गर्नुहुनेछ । प्रजापति दाइको आफ्नै टायल उद्योग रहेछ भक्तपुरमा जहाँ घरमा लाग्ने विभिन्न किसिमका टायलहरु बनाइने रहेछ, बाटोमा कहिँ पनि टायल, इट्टा वा सिमेन्ट फ्याक्ट्रि देखियो भने, दाइ एक किसिमको ‘कम्पेरिजन’ गर्नुहुन्थ्यो ।
अर्का रायमाझी दाइ, कान अलि कम सुन्ने हुँदा, ‘ईयरपिस’ लगाउनु हुँदोरहेछ, र आफू ‘लो’ प्रोफाइलमा नै बस्न रुचाउनु हुँदोरहेछ । उहाँको प्रचार नेपालमा खासै रैनछ, मलाई आफ्नो प्रचार गर्नुछैन भन्नुभएको थियो, राजमाझीदाइले । तर उहाँको कला भने भारत, थाइल्यान्ड, देखि मेरिल्यान्ड राज्य सम्म फैलिएको रहेछ । ‘फाइन आर्ट’ पढ्नुभएको दाइको विशेष दख्खल मुर्तिमा रहेछ र उहाँ जुनसुकै माध्यमबाट पनि मुर्ति बनाउन सक्ने हैसियतको हुनुहुँदोरहेछ । काठमाडौँ मै भएर पनि, उहाँको खासै चर्चा र परिचर्चा भएको खासै थाहा छैन मलाई, तर पनि उहाँको कुरा सुन्दा, उहाँको प्रचार हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो ।
‘क्याटरिङवाला’ ले के खाने भन्ने सोध्दै आयो, हामीले ४ जनाको लागि खाना को अर्डर गर्यौँ, अनि साथमा भएको बिस्कुट, दालमठ, चिप्स र चाउचाउ खान थाल्यौँ । विभिन्न स्टेशनमा रेल रोकिँदै अघि बढ्दै गर्यो, झ्यालको छेउमा बसेको म, धेरैजसो बाहिर हेर्दै रमाइरहेको हुन्थेँ । रेल आफ्नो गतिमा चलिरह्यो, मलाई रेलमा यात्रा गर्दा भारत साँच्चै ठूलो रहेछ जस्तो लाग्यो । जब पनि पर पर साना डाँडाहरु देख्थेँ, आफूलाई घरबाट देखिने चुरे पहाडको याद आउँथ्यो, ठ्याक्कै उस्तै लाग्थ्यो ।
जब पनि म नेपालमा रेल कुदेको कल्पना गर्थेँ, तब मलाई लाग्थ्यो, रेल कुदाउन लिक बनाएर मात्र हुँदैन ‘स्टेशन’ चाहिन्छ, स्टेशनको लागि पर्याप्त ठाउँ कहाँ पो छ र? रेल रोकिने बित्तिकै म प्लेटफार्ममा कुद्दै झर्थेँ, कारण मलाई घरमा फोन गर्नुथियो । म सकुशल छु र यात्रा रमाइलो भइरहेछ भनेर मैले भन्न सकेको खण्डमा सबैलाई पिर कम लाग्ने थियो । तर मैले पहिलो दिन कुनै प्लेटफार्मबाट फोन गर्न पाइँन ।
हाम्रो ‘बाग्मती एक्सप्रेस’ रेल आफ्नै गतिमा दौडिरहेथ्यो, दायाँ वाँयाका लिकमा पेट्रोल, कोइला र अन्य मालवाहक रेलहरु देखिन्थ्यो । त्यसबेला नेपालमा निम्तिरहने पेट्रोल संकटको कुरा झल्झली याद आउँथ्यो । जवलपुरमा झर्ने साथीले बाटोमा देखिएका ठाउँहरुको परिचय बेला बेलामा गराउँथ्यो । बिरला, सत्ना जस्ता सिमेन्ट फ्याक्ट्रिहरु परै बाट नियालियो । बस्ति भन्दा धेरै पर, त्यस एरियामा सिमेन्ट फ्याक्ट्रिहरु मात्र रहेछन् । १ बजे खाना खाइयो । समय भन्दा हाम्रो रेल ४ घन्टा ढिलो थियो । जवलपुरमा त्यो साथि उत्रियो, केही सँगैका सिट पनि खालि भयो, तर त्यहाँ अरु चढ्नेहरु टन्नै रहेछन् । जवलपुरमा ‘इन्डियन आर्मी’ को लागि चाहिने गाडिहरु बनाइँदो रहेछ । जवलपुरबाट पनि घरमा फोन गर्ने ट्राइ गरेँ, तर फोन गएन ।
जवलपुरबाट ८ जनाको केटाहरुको ग्याङ हामीसँगैको सिटहरुमा आएर बसे । भर्खर इन्जिनियरिङ सकेका उनीहरु जागिर कै सिलसिलामा बेङ्लोर जाँदै रहेछन् । उनीहरु आपसमा कुरा गरेर हाँसेको हाँसेकै गर्थे, हामीलाई झर्को लाग्ने गरि । चिया, खाजा, अनि खाना नियमित डुलाउँदै ल्याउँथे, अनि हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार खाइरहेका थियौँ । नागपुरमा आइपुग्दा साँझ पर्यो, हामीले रेलकै क्याटरिङको खाना खायौँ । त्यहाँ पनि म फोन गर्न झरेँ तर टेलिफोन बुथ भेटिएन । अँ अर्को कुरा, जुन स्टेशन मा रेल रोकिन्थ्यो, त्यो स्टेशनमा हामी पानी लिनलाई बोतल बोकेर कुदिहाल्थ्यौँ, अनि संघर्ष गरेर पानी भरिन्थ्यो । नागपुरबाट रेल अगाडि बढ्यो, अझै २४ घन्टा भन्दा बढिको यात्रा बाँकि नै थियो । नागपुर कटेपछि हामी फेरि सुत्यौँ ।
अर्को दिन उठेपछि हामीले फेरि अघिल्लो दिन कै दैनिकी दोहोर्यायौँ । बिहान चिया, खाजा, अनि खाना, त्यसपछि फेरि चिया यस्तै यस्तै । दाइहरुले कुरा गर्न थाल्नुभो, यति वर्ष अगाडि मुम्बइबाट जाँदा यस्तो भयो, दिल्ली जाँदा यस्तो भयो । उहाँहरु आफ्नो पहिलेको रेल अनुभव सुनाउनु हुन्थ्यो, छक्का आएर साह्रै दुख्ख दिन्थे, खै अहिले त ट्रेन मा यस्तो हुँदोरहेनछ भन्नुहुन्थ्यो । आफूलाई त के थाहा ? हुन्छ कि हुँदैन, त्यही नि धरानबाट अनिशदाइले, ‘छक्काहरुले दुख्ख देलान, खुजुरा पैसा बोक्नु, केही गर्दैनन्’ भन्नुभएको थियो । आफुलाई रेलमा केही त्यस्तो भएको थिएन । कोही माग्न आएको पनि थिएन, निकै गज्जबको यात्रा भइरहेको थियो । उहाँहरु सँग मैले नि सही थप्दै, त्यही त हिजोआज रेलमा हुँदैन क्यारे, भन्दिएँ ।
हामी ४ जना झ्यालपट्टि थियौँ, अनि भित्रपट्टि जबलपुरबाट चढेका तिनै ८ जना केटाहरु थिए । सँगै रहँदा बस्दा हामी सबै साथि भइसकेका थियौँ । नाम कसैको थाहा थिएन तर पनि हाम्रो कुराकानी चैँ भइरहन्थ्यो । कुराकानी चलिरहेको थियो, उनीहरुले भने, लौ ताली पड्काउने आए है । मैले नि तालीको आवाज सुनेँ, लौ छक्का आएछन् भनियो । एउटी राम्री केटी आइ, केटा नै पो रहेछ, तर पनि उसले यति सालिनता सँग कुरा गर्यो कि सबै मख्ख भए । उसले पैसा मागि, ‘कोही त दो, तुम दो ना’ भन्दै सबैलाई ईशारा गर्थी । उसको कुरा र बोलाइबाट सबै प्रभावित भएका थिए, एउटा केटोले पैसा निकालेर दियो, उ गइ । त्यसपछि उसकै चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो ।
हुँदैनन् भनेको त अझै हुँदा रहेछन् भन्ने जस्तो कुरा चल्यो, त्यसपछि अर्को पनि पो आइपुग्यो, ताली पड्काउँदै । साह्रो रुखो स्वर रहेछ, पैसा दो भन्न थाल्यो । तर हामीहरु सबै मुखामुख गरेर बस्यौँ, केही बोलेनौँ । एउटा केटाले पैसा छैन, यत्ति छ भन्दै ५ को डलर दियो । त्यो ५ को डलर फिर्ता दिँदै फन्केर, सराप्दै हिँड्यो । मलाई लाग्यो, त्यही भएर यिनीहरुलाई छक्का भन्दा रहेछन् । साह्रै रुखो व्यवहार थियो ! फेरि पनि पहिले आउनेकै चर्चा भयो, ‘कम्पेयर’ गरियो ।
विजयवाडामा रेल रोकियो । मैले बल्लतल्ल त्यहाँबाट भाइलाई फोन गरेँ । ट्विटरमा नानाथरिको हल्ला चलिराको छ भनेर भाइले सुनायो । सबैलाई ठिकठाक छ भन्दिनु भनेर फोन राखेँ । अब यसपछिको ठूलो स्टेशन भनेको चेन्नइ थियो । रेल अघि बढ्यो । फेरि एउटा छक्का आइपुग्यो, त्यो त झन् सबैभन्दा रुखो रहेछ । अनि यति छाडा रहेछ कि, निहुँ खोजेर एउटा साथिलाई ‘देखाउन’ खोजिगयो । धन्न देखाएन, त्यो आउँदा यति ‘इरिटेट फिल’ भएको थियो कि के भन्नु र ? तिनीहरुलाई कसैले कारवाही गर्दैनन् कि क्या हो ? ट्रेनमा यात्रा गर्नेलाई कति सताउँदा होलान् । फेरि पनि पहिले कै केटी को चर्चा भयो, त्यसको बोली कस्तो थियो अनि यिनीहरु को कस्तो छ भन्दै ।
जब रेलको लिकको साइडमा ‘नुन’ जम्मा पार्ने ठाउँहरु देखियो, तब हामी समुन्द्रको धेरै नजिक छौँ भन्ने आभाष भयो । खेतबारी र नरिवल घारी हुँदै रेल अघि बढिरह्यो । ४ घन्टा भन्दा बढि ढिलो रहेको हाम्रो रेलले लगभग आफ्नो समयलाई ‘व्यालेन्स’ गरिसकेको थियो । ठाउँ अनुसार, र बाटो अनुसार रेलले कहिले विद्युतिय इन्जिन त कहिले डिजेल इन्जिन जडान गर्थ्यो । हामी यस्तै साँढे ४ बजेतिर चेन्नइ आइपुग्यौँ । चेन्नइ समुन्द्रको नजिक रहेको शहर हो भन्नेकुरा हामीले देखिरहेको समुन्द्र र पानीजहाज ले नै अवगत गराइसकेको थियो । चेन्नइको स्टेशनमा रेलको मुख परिवर्तन हुँदोरहेछ । अघिल्लो सातौँ डिब्बामा भएका हामी चेन्नइबाट रेल पश्चिमतिर लाग्दा पछिल्लो सातौँ डिब्बामा थियौँ ।
चेन्नइबाट रेल निरन्तर पश्चिम बढ्यो । साँझ पर्दै थियो । ठाउँठाउँमा सानातिना डाँडाहरु देखियो । ती ठाउँहरु देख्दा अमलेखगन्ज, चुरे, जस्ता नेपालका ठाउँहरु को याद आउँथ्यो, दुरुस्तै उस्तै लाग्थ्यो । अब हाम्रो स्टेशन केही घन्टामै आउने निश्चित थियो, अत रेलमा बेलुकाको खाना नखाइने भइयो । स्टेशन आउन लागेर होला, हामीहरु आपसमा झनै धेरै कुरा गर्न थालेका थियौँ । ती ८ जना केटाहरु पनि नेपालको बारेमा खुब चाख दिएर कुराहरु सोध्न थालेका थिए, २-३ जनालाई चाँहि नेपालको बारेमा थाहा रहेछ । उनीहरुले सोधेका कुराहरु हामीले पनि गज्जब ले बुझाएर भन्दियौँ ।
राती १० बजेतिर हामी ‘बेङ्लोर इस्ट’ मा उत्रियौँ । बेङ्लोर शहरमा पाइला टेकिसकिएको थियो, निकै अनौठो लागिरहेथ्यो । पटना देखि चेन्नइसम्म आउँदा, बाटोको छेउाछाउमा झुपडिहरु टन्नै देखिएको थियो तर बेङ्लोरमा मैले त्यस्तो देखिन । अन्य ठाउँका प्लेटफार्महरु फोहर थिए, बेङ्लोर इस्टमा त ‘थुक्न मनाही’ भनेर लेखिएको रहेछ । ३ जना साथीहरु होटलमा जाने हुनुभो, मैले चाँहि बेङ्लोरमा हुनु भएको दाइलाई फोन गरेँ । उहाँले लौ आउ भन्नु भो, ‘अटो’ लिएर जाने भएँ म । स्टेशनमै अटोवाला आइपुगेको थियो, उसले भन्यो तपाई पनि सँगै हिँड्नु त्यहाँबाट तपाईको ठाउँ अझै अगाडि हो, अनि बस वा अटोमा जानुहोला । उसको सल्लाह ठिकै लाग्यो, अनि दाइहरुले पनि जौँ जौँ भन्नुभयो । अटो ले ‘शिवाजीनगर’ को एक होटल मा ल्याइदियो ।
दाइहरुले ३ वटा वेड भएको एउटा कोठा हेर्नुभयो, म भने अब दाइहरुको मा जान्छु भन्ने सोचेर हिँड्नै लागेको थिँए । अटोवालाले भन्यो, यहाँबाट अटोमा जानु भो भने महंगो पर्छ, पब्लिक बस चढेर जानु । ठाउँ थाहा छ भने, यतिबेला जानु, हैन भने राती खोजेको खोजेकै भइएला ठाउँ भन्यो । मलाई उसको कुरा ठिक लाग्यो, बेङ्लोरको दाइहरुको फोन नम्बर र ठेगाना त थियो । तर यति ठूलो ठाउँमा आधिरातमा टेलिफोन बुथ खुलेको नहोला, फोन गर्ने ठाउँ नपाइएला भन्ने जस्तो लाग्यो । अनि त्यहिँ नै बस्ने निधो गरियो । छेउकै होटलमा गएर खाना खाइयो, अनि आएर घुप्लुक्क सुतियो ।
बिहानै मैले साथिहरु सँग बिदा लिएर अटो लिएर हिँडे । अटोवालालाई ‘मुर्गेसपाल्यम’ लगिदिनु भने, उसले हुन्छ भन्यो । झिसमिसे बिहान भएका कारण, बाटो खुल्लो थियो । करिव आधा/एक घन्टाको अटो यात्रा पछि, अटोवालाले एउटा चोकमा ल्याएर रोकिदियो, अनि भन्यो तपाईले भनेको ठाउँ यहि हो । ल ठिक छ उसोभए भनेर, अटोवाट ओर्लिएँ ।
ओर्लिएपछि कता जाने, कता जाने भयो, त्यही पनि मुलबाटो क्रस गरेर अर्को भित्री बाटो समातेँ । करिब ५ मिनेट जति झोला भिरेर हिँडे, लुखुर लुखर । बेङ्लोरको रोडमा बिहान, पहिलोपटक म हिँडिरहेको थिँए, थाहा छैन म कुन ठाउँमा छु र कुन दिशा तर्फ गइरहेछु । तर पनि बेङ्लोरमा ठगहरु हुँदैनन् भन्ने सुनेको भएर मैले अटोवालाले भनेको कुरामा विश्वास गरेको थिँए । साँच्चै, म मुर्गेसपाल्यम मै रहेछु, एउटा पसलको बोर्ड पढेर थाहापाएँ ।
मुर्गेसपाल्यम त आइपुगिएछ, तर यति धेरै घरमा दाइहरु कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा थिएन । त्यही पनि अघि बढिरहेँ । जम्मा हिँडेको ५-६ मिनेट, त्यही नि मलाई धेरै हिँडे जस्तो लागिसकेको थियो, मैले बाटो छेउको एक चियापसलबाट फोन गरेँ । फोन गरेको केही समय दाइ आइपुग्नु भयो । मैले फोटोमा मात्र देखेको थिँए, फेसबुकमा दाइलाई । मैले चिनिहालेँ । त्यो कुरा भन्दा पनि बढि अचम्म त यो लाग्यो कि, मैले घर कै छेउबाट फोन गरेको रहेछु । र अहिलेसम्म पनि छक्क परिरहेछु, कसरी ठ्याक्कै घरै छेउमा आएर फोन गरेछु भनेर । मलाई बेङ्लोर आइपुगेँ भन्ने भयो, म दाइहरु बसेको घरमा आइपुगेको थिँए । घर आइपुगेर, नुवाइधुवाइ गरेर अफिसतिर हिँडियो।
म बेङ्लोर आइपुगेँ अनि मितिको हिसाबले भन्ने हो भने, आज ठ्याक्कै १ महिना भयो, यहाँ आइपुगेको ।
Divas August 1, 2012 at 11:57 AM
हहाहा.. म पनि मित्र राष्ट्रको भ्रमण योजना गरिराछु.. तर, समलिङ्गीको कुरा सुनेर झसङ भो.. पैसा लिने दाहेक अरू केही त गरेन ब्रोलाई ? ‘छक्का’हरूले... हाहाहा
सर्ट लगाइएको छ भने, सर्ट को माथिल्लो गोजीमा चैँ केही नि नराखौँ है, फेरि गोजिभित्र माथिबाट हात हालेर, जे छ त्यै लग्दिन्छन् !